आलुका फाइदा के–के? जान्नुहोस् - Everest Dainik - News from Nepal
आलुका फाइदा के–के? जान्नुहोस्
काठमाडौं, चैत ४ । आलु एक सर्वसुलभ र सस्तो तरकारी तथा खाजा हो । नेपालीको भान्सामा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने तरकारी पनि यही हो । आलुलाई जुनसुकै तरकारीसँग पनि मिसाएर खान पाइन्छ । साथै, यसलाई धेरै किसिमका परिकार बनाएर खान मिल्छ । आलु स्वास्थ्य र पोषणका दृष्टिकोणले समेत उपयोगी मानिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस डेढ अर्बको आलु उत्पादन
–आलु पोषणको भण्डार हो । यसमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन र मिनरल्स पाइन्छ ।
–आलु भिटामिन, खनिज र एन्टिअक्सिडेन्टको राम्रो स्रोत मानिन्छ । आलुमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टका कारण मधुमेह, हृदय रोग, क्यान्सर र पुराना रोग बल्झिने समस्या कम हुन्छ ।
–रक्तचाप, प्रतिरक्षा प्रणाली, पाचन प्रणाली लागि पनि आलु उपयोगी तरकारी मानिन्छ ।
–आलुमा धरै स्टार्चको मात्रा हुन्छ । जसले रगतमा इन्सुलिनको मात्रालाई नियन्त्रणगरी ब्लड सुगरको जोखिम घटाउँछ ।
–नियमित आलु खाने गर्नाले मानिसमा कब्जियत, पेट दुख्ने, ग्यास भरिने आदि समस्याको जोखिम कम हुन्छ ।
–एक अध्ययनका अनुसार आलु खाएर शरीरमा हर्मोनको स्तर बढाउन पनि सकिन्छ ।
ट्याग्स: advantage, potato